Michael Kors dia nandefa ny làlan'ny fidirana amin'ny Android Wear Smartwatches | Androidsis
Michael Kors dia mandefa ny tsipika fahazoana smartwatches be loatra sy mavesatra entin'ny Android Wear
Manuel Ramirez | | About us, SmartWatch
Michael Kors dia nanambara ny fisian'ny a andalana vaovao amin'ny smartwatches antsoina hoe Access. Ireo finday maranitra vaovao, izay nanjary fantatry ny fiandohan'ny taona, dia mihazakazaka amin'ny Android Wear ary ho tonga amin'ny fomba roa mampiavaka azy ireo tsara. Marika izay nifandray tamina famantaranandro mpamorona ary mampiseho toetra miavaka sasany.
Dylan dia iray amin'ireo fomba roa ary miomana amin'ny lahy sy ny vavy ho an'ny karazana fanatanjahan-tena, raha "Bradshaw" kosa vita amin'ny vy tanteraka ary mifantoka amin'ny vehivavy mpihaino. Ireo famantaranandro roa dia miavaka amin'ny habeny, toy ny tranga misy amin'ny marika rehetra antsoina hoe Kors, ary ho tonga amin'ny vidiny izay hanomboka amin'ny $ 350.
Ny iray amin'ireo mampiavaka ny famantaranandro Kors Access dia ny azy ireo ny tarehy mijery dia ho azo namboarinaAnkoatra ireo fiasa rehetra fantatsika momba ny Android Wear tao anatin'izay taona lasa izay. Ireo tarehy fiambenana isan-karazany dia novolavolaina tamin'ny fakana tahaka ny endrik'ireo analog amin'ny famantaranandron'i Michael Kors hafa ary afaka ampanjifaina amin'ny loko isan-karazany.
Midika izany fa azonao atao izany ampanjifaiko ireto efamira fiambenana ireto ka amin'ny fotoana iray amin'ny antoandro dia hiova ho azy ny mitambatra tonga lafatra amin'ny maraina na amin'ny alina. Teo no nanantitranteran'i Kors ny mety ho fampifangaroana loko, tarehy ary dials.
Ireo famantaranandro roa ireo dia mitondra ny haben'ny Android Wear amin'ny zavatra mbola tsy fahita ary milaza fa milanja ny azy koa izy ireo. Ao anaty ao anatiny no ahitantsika a Snapdragon 2100 puce, tontonana mikasika ny loko, mpandahateny, efijery 320 x 290 ary ny fanarahan-dia hetsika. Mazava ho azy, andao hadino ny momba ny maso tahan'ny maso.
Tsy maintsy ataontsika mazava fa mijery famantaranandro isika miavaka amin'ny habeny sy lanja, koa aza manantena ny kely sy maivana. Ny smartwatches fidirana dia ho hita any Etazonia, Fanjakana Mitambatra ary firenena 16 hafa manomboka anio.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Michael Kors dia mandefa ny tsipika fahazoana smartwatches be loatra sy mavesatra entin'ny Android Wear
HTC dia manambara ny fahatongavan'ireo finday finday Desire vaovao
Google dia handefa takelaka 7-inch vita amin'ny Huawei miaraka amin'ny RAM 4 GB amin'ny faran'ny taona